Nofy ratsy mahatsiravina hiaina ao amin'ny Dead by Deadlight izao amin'ny Android | Androidsis
Gore, fampihorohoroana ary ra ao amin'ny Dead by Daylight, lalao video marobe tsy ho an'ny rehetra
Efa ela aho no tsy nandinika ny aseho araka ny nasehon'i Dead by Daylight, mpilalao marobe an-tserasera izay tsy maintsy hamonjentsika ny tenantsika amin'ilay mpamono olona tsy mety resy izay entin'ny mpilalao iray na ny tenantsika hamono ny ain'ireo mpilalao efatra hafa izay manandrana mandositra izany nofy ratsy mampivarahontsana izany.
Lalao izay dia avy amin'ny consoles sy PC ary manao izany amin'ny fomba lehibe izy noho ilay rivo-piainana lehibe tratra, ilay fihenan-tsakafo izay hamela anao amin'ny ra mangatsiaka sy ny feo izay hanamafisan'ny tsindry tsirairay ny fontsika. Ataovy.
1 Ny horohoro mahatsiravina avy amin'ny Dead by Daylight
2 Mahazoa toetra sy fahaiza-manao vaovao
3 Nahantona tsy azo ihodivirana
Ny horohoro mahatsiravina avy amin'ny Dead by Daylight
Raha manomboka amin'ny filazana isika fa io mpamono olona tsy mety resy io dia lalaovin'ny gamer ho afaka hanantona anao amin'ny rà rehetra afaka mikoriana izy Avy amin'ny vatanao dia tsy milaza zavatra hafahafa izahay, satria ho zavatra mifamatotra akaiky amin'ny lalao. Indrindra satria hilaza aminao izany fa tsy maintsy mandeha ianao hamonjy ny namanao izay, toa anao, manandrana mandositra ity nofy ratsy ity.
Maty amin'ny antoandro dia multiplayer amin'ny Internet izay andraisan'ny iray ny andraikitry ny mpamono olona tsy mety resy ary ny efatra hafa dia mety ho an'ireo iharan'izany; raha tsy afaka mandositra izy ireo amin'ny fotoana mety. Lalao iray manana fihenjanana ampy ka hieritreretanao indroa ny hilalao indray, satria nofy ratsy fotsiny izany isaky ny lalao.
Izany fihenjanana izany dia taratry ny maherifon'ny sarimihetsika mampatahotra toy ny The Texas Chainsaw Massacre o Zoma faha-13 dia afaka mahatsapa izany ianao rehefa manomboka ny lalao. Raha mila miverina amin'ny lalao mitovy amin'izany aho, dia mety ho Left 4 maty ho an'ny PC sy ny consoles, indrindra rehefa milalao zombie na biby avy any ambanin'ny tany.
Mahazoa toetra sy fahaiza-manao vaovao
Raha efa tsy mampino ny lalao base, ny Dead by Daylight dia tonga amin'ny Android miaraka amin'ireo freemium rehetra ahafahantsika mahazo fahaiza-manao, endri-tsoratra vaovao ary maro hafa. Miresaka momba izay azonao atao izahay manasitrana ny hafa, mampiasa fahaiza-manao fanekena na manatsara ny hafa hanafina. Tahaka ny ahafahanao mihazona mpilalao malaza amin'ny sarimihetsika mahatsiravina na koa lalao video; eny, misy ilay lehilahy antitra misy volombavany fotsy avy amin'ny Left 4 Dead.
Toy izany koa ilay mpamono olona tsy mety resy ary hanana andian-tsoratra miaraka amin'ny fahaizany manokana ianao. Raha miresaka momba ny fiatrehana nofy ratsy ianao dia marina izany. Afaka mandeha amin'ny mpihaza ianao miaraka amin'ny famaky ny Trapper amin'ny fiadiany maranitra. Ny marina dia mbola tsy nisy fihenjanana be loatra talohan'io fiandrasana tsy manam-petra io raha manandrana manamboatra ny iray amin'ireo motera efatra ao amin'ny toby ianao ary mamela anao hamoha ny varavarana fivoahana.
Izany dia nilaza fa ny gameplay dia vita tsara, ary na dia izany aza afaka hitovy amin'ny kisoa guinea isika Rehefa milalao toy ny olon-tsotra isika dia ho afaka hampiasa fanaka sasany hanasarotana ny raharaha amin'ireo mpamono olona ireo. Ohatra, afaka manipy paleta ianao mba hahatonga azy hanao dia lavitra na rehefa tratrany ianao, aza mijanona mihetsika mba ho sarotra kokoa ny fihetsiny.
Nahantona tsy azo ihodivirana
Maty amin'ny antoandro dia misy fotoana mahory. Mampitandrina anao aloha izahay fa raha olona saro-pady ianao dia mandalo. Tsy nanalavitra ny antsipiriany izy ireo ary mahalana no ahitanao lalao toy izany. Azo ampiasaina ho an'ny olona mihoatra ny 18 taona izy io. Tsy te-hanome tahirin-kevitra bebe kokoa izahay, fa amin'ny fanangonana fehezan-teny vitsivitsy amin'ity lahatsoratra ity dia azo atao izany. Gore dia mitovy gory be. Raha manandrana mandositra ianao rehefa mihantona dia tandremo amin'ny fiainanao fa maharary izany.
Ny traikefa vokariny dia miavaka. Raha ny fahitana azy dia tsy mampino ilay toerana, ny famolavolana ny endri-tsoratra, ny feo, ny setroka na ireo andalan-tsoratra maizina ireo. Ny zava-drehetra dia noforonina tsara mba ho lalao nofy ratsy na horohoro tsara indrindra izay tsy mbola azontsika nilalao. Ny lalao dia mandeha an-tanana ary manana antsipiriany tena tsara. Afaka miafina ao anaty valizy, mandeha miadana kokoa mba tsy hamoaka tabataba rehefa mandeha na lalan-dra rehefa maratra isika dia fotoana tena lehibe.
Ny Dead by Daylight dia tonga amin'ny fomba tsara indrindra avy amin'ny PC sy ny consoles hiteraka traikefa mahatsiravina tsara indrindra amin'ny finday. Tsy misy lalao izay manakaiky ny Android. Toa mihomehy ny hafa. Raha tianao ny gore dia esorinao izany. Mazava ho azy, amin'izao andron'ny fihazonana izao ary tsy hialantsika ao an-trano isika, dia milalao lalao izay miteraka fanandramana mihoa-pefy ary mety tsy hahafahantsika miala velona akory, angamba izany no tsy mety indrindra. Ity lafiny ity ankoatr'izay, iray amin'ny fahatongavana tsara indrindra ho an'ny Android hatreto amin'ity taona ity. Izahay dia mamela anao maivana kokoa, fa feno kalitao: Zombie Night Terror.
Traikefa mahazatra amin'ny sarimihetsika mahatsiravina iray manontolo ary hahatonga anao hihazona ny farafara fandriana rehefa milentika ao anaty nofy ratsy. Spectacular.
Fialana amin'ny toerana misy azy sy ny fampihorohoroana niavian'izany
Karazan'olona sy mpamono isan-karazany
Ny antsipiriany toy ny lalan'ny rà na ny fampiasana ny tontolo iainana hanafenana antsika
Ny sarintany dia tonga lafatra ary manampy betsaka amin'ny traikefa mahatsiravina
Elaela ny fotoana anaovana ny lalao
Tsy mety amin'ny saro-pady
Mety hanimba ireo andro fihazonana ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Gore, fampihorohoroana ary ra ao amin'ny Dead by Daylight, lalao video marobe tsy ho an'ny rehetra